Thumela i-imeyili nge-SMTP Ku-WordPress Nge-Microsoft 365, i-Live, i-Outlook, noma i-Hotmail | Martech Zone
Uma usebenza WordPress Njengesistimu yakho yokuphathwa kokuqukethwe, isistimu uqobo lwayo ilungiselelwe ukusunduza imiyalezo ye-imeyili (njengemiyalezo yohlelo, izikhumbuzi zephasiwedi, njll.) nge-Host yakho. Kodwa-ke, lesi akusona isixazululo eselulekayo ngezizathu ezimbalwa:
Abanye abaphathi empeleni bavimba ikhono lokuthumela ama-imeyili aphumayo asuka kuseva ukuze angabi isisulu sabaduni bengeze i-malware ethumela ama-imeyili.
I-imeyili evela kuseva yakho ngokuvamile ayiqinisekiswanga futhi ayiqinisekisiwe ngezindlela zokuqinisekisa ukulethwa kwe-imeyili njenge SPF or I-DKIM. Lokho kusho ukuthi lawa ma-imeyili angavele adluliselwe ngqo kufolda engenamsoco.
Awunalo irekhodi lawo wonke ama-imeyili aphumayo adonswa kusuka kuseva yakho. Ngokubathumela nge I-Microsoft 365, Live, Outlook, noma Hotmail akhawunti, uzoba nayo yonke kufolda yakho ethunyelwe - ukuze ubuyekeze ukuthi yimiphi imilayezo isayithi lakho eliyithumelayo.
Isixazululo, kunjalo, ukufaka i-plugin ye-SMTP ethumela i-imeyili yakho ngaphandle kwe-akhawunti yakho ye-Microsoft esikhundleni sokuvele ucindezelwe kusuka kuseva yakho. Ngokwengeziwe, ngincoma ukuthi usethe ifayela le- hlukanisa i-akhawunti yomsebenzisi we-Microsoft kwalokhu ukuxhumana kuphela. Ngale ndlela, awudingi ukukhathazeka ngokusethwa kabusha kwephasiwedi okuzokhubaza ikhono lokuthumela.
Ufuna ukusetha i-Gmail Esikhundleni? Chofoza lapha
I-plugin elula ye-WP SMTP WordPress
Ohlwini lwethu lwe- ama-Plugin amahle kakhulu e-WordPress, sibala uhlu lwe- I-WP SMTP elula i-plugin njengesixazululo sokuxhuma isiza sakho se-WordPress kuseva ye-SMTP ukuqinisekisa nokuthumela ama-imeyili aphumayo. Ilula ukuyisebenzisa futhi ifaka phakathi ithebhu yayo yokuhlola yokuthumela i-imeyili!
Izilungiselelo ze Microsoft zilula kakhulu:
Idinga i-SSL: Yebo
Idinga i-TLS: Yebo
Idinga Ukuqinisekiswa: Yebo
Itheku le-SSL: 587
Nakhu ukuthi libukeka kanjani kwelinye lamakhasimende ami, iRoyal Spa (angibonisi izinkambu zegama lomsebenzisi nephasiwedi):
Thumela i-imeyili Yokuhlola I-WIth The Easy WP SMTP Plugin
Namathisela iphasiwedi eyenziwe Easy WP SMTP futhi izogunyaza kahle. Hlola i-imeyili, uzobona ukuthi ithunyelwe:
Manje usungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Microsoft, iya kufolda ethunyelwe, bese ubona ukuthi umyalezo wakho uthunyelwe!
Tags: I-DMARCi-wp smtp elulaukukhishwa kwe-imeyilihotmailLivei-Microsoft 365umbonophp imeyilithumela i-imeyilismtpi-plugin ye-smtpi-spfWordPressi-imeyili ye-wordpressplugin wordpress